भिडियोको साथ मार्केटि R पहुँच विस्तार गर्ने Re कारणहरू Martech Zone
भिडियो तपाईंको शस्त्रागारको मार्केटिंग पहुँच विस्तार गर्नको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरणहरू मध्ये एक हो, यद्यपि यसलाई प्राय: बेवास्ता गरिन्छ, कम प्रयोग गरिन्छ र / वा गलतफहमी गरिन्छ।
त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन कि भिडियो सामग्री उत्पादन डरलाग्दो छ। उपकरण महंगा हुन सक्छ; सम्पादन प्रक्रिया समय खपत, र क्यामेराको अगाडि विश्वास खोज्ने सधैं सजिलो हुँदैन। धन्यबाद हामीसँग आज यी चुनौतिहरू पार गर्न मद्दत गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। सबैभन्दा नयाँ स्मार्टफोनले K के भिडियो प्रस्ताव गर्दछ, सम्पादन सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सजिलो र सजिलो भएको छ र तपाई आफ्नो अन-क्यामेरा सीपलाई फेसबुक लाइभ, स्न्यापचट, र पेरिस्कोप जस्ता सामाजिक नेटवर्कमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए के यी चुनौतिहरू पार गर्न समयको सदुपयोग गर्नु उचित हो, र कसरी भिडियोले तपाईंको मार्केटि reach पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ?
मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू वास्तवमा भिडियो विज्ञापनहरू मनपराउँदछ र साझेदारी गर्नुहोस्!
जब एक आधुनिक उपभोक्ताले उनीहरूको कुराको बारेमा अधिक जान्न चाहन्छन् जुन उनीहरूको पहिलो प्रवृत्ति चाहिन्छ उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्मार्टफोनमा पुग्नु हो। गुगलको अनुसन्धान देखाउँदछ कि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू जसले उनीहरूको यन्त्रहरूमा भिडियोहरू हेर्दछन् १.1.4x बढी विज्ञापनहरू देख्ने सम्भावना छ भने डेस्कटपमा ती, र १.1.8x अधिक साझेदारी गर्ने।
गुगलले भिडियो मनपर्दछ!
तपाईंको सामग्री छ 53x अधिक सम्भावना गुगलको खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठमा पहिले देखाउन यदि तपाईंसँग आफ्नो वेबसाइट पृष्ठमा इम्बेड गरिएको भिडियो छ भने। यो सायद कारण हो Cicsco भविष्यवाणी गरीरहेको छ त्यो भिडियो २०१ 69 मा सबै उपभोक्ता इन्टरनेट ट्राफिकको%%% बनाउनेछ।
भिडियो ग्राहकहरु मा अधिक संभावना रूपान्तरण!
एक अवतरण पृष्ठ मा एक साधारण भिडियो गर्न सक्छन् convers०% ले रूपान्तरण बढाउनुहोस्। यदि तपाईं ईमेलमा भिडियो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो रूपान्तरण दर %००% सम्म बढाउन सक्नुहुन्छ। B300B को बारेमा के हुन्छ? Of०% अधिकारीहरूले भिडियोमा उत्पादन / सेवा हेरेर थप जानकारीको खोजी गर्छन्,% 2% वेबसाइट भ्रमण गर्दछन्, र%%% ले कल गर्दछ।
म जान सक्दछु, तर अहिलेका यी3सरल कारणहरू तपाईं कसरी उत्साहित बनाउनको लागि पर्याप्त हुनुपर्दछ तपाईं कसरी भिडियोको साथ मार्केटिंग पहुँच विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। संभावनाहरूले वास्तवमा तपाईंको सामग्री अवलोकन गर्दछ, गुगलले तपाईंको सामग्रीलाई प्राथमिकता बनाउँदछ, र भिडियोले तपाईंको सामग्री डलरमा बदल्छ।
टैग: मार्केटिंग भिडियोहरूभिडियो मार्केटिंगभिडियो मार्केटिंग लाभ
पर्याप्त एजेन्सीहरूले प्रोस्पेक्ट्सलाई हिड्नको लागि बताउँदैन
माल्टर्वाइजिंग: यसले तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग अभियानको अर्थ के हो?
डिसे 21, 2016 मा 9: 56 AM
नमस्ते ह्यारिसन, म तपाईंसँग सहमत छु।
भिडियो अर्को जेन सामग्री हो। सबै अन्य विकल्पहरूको तुलनामा भिडियोले उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव दिन सक्छ। भर्खर म एउटा लेख पार गरें जसले रूपान्तरणलाई बढावा दिन भिडियोको महत्त्व हाइलाइट गर्‍यो। फोर्ब्स लेखक जेसन डीमर्सले आफ्नो एक लेखमा उल्लेख गरे कि भविष्य भिडियो सामग्री हो। सिस्कोद्वारा गरिएको एक अध्ययनले भविष्यवाणी गर्यो कि २०१ 2018 सम्म 79 internet% इन्टरनेट ट्राफिक भिडियो विज्ञापनबाट आउँनेछ। तपाईंको रेफरीको लागि, यो लेख चिक गर्नुहोस् जसले भिडियोको महत्त्व औंल्याउँछ http://www.kamkash.com/top-8-online-marketing-strategies/